အင်တာနက်ဆိုင်ဝန်းထမ်း အလိုရှိ ! - MYSTERY ZILLION
အင်တာနက်ဆိုင်ဝန်းထမ်း အလိုရှိ !
Vote Up0Vote Down mgmgkyaw May 2010 Posts: 86Registered Users အင်တာနက်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဝန်ထမ်းအလိုရှိပါသည်..ကြည့်မြင်တိုင် (သို့) အလုံ တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါက...ပိုအဆင်ပြေသည်..အင်တာနက်အခြေခံအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ပါက...အလုပ်သင်သဘောမျိုးနှင့် သင်ကြားပေးမည်...ဆင်းရမည့် အချိန်မှာ တစ်ပတ်(၆)ရက် မနက်(၃)ရက် ည(၃)ရက်ဖြစ်ပါသည်...ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ.... Cookie Internet Cafe`, အမှတ်(၄၆၈),ဦးလူမောင်လမ်း၊သီတာရုပ်ရှင်ရုံ မျက်စောင်းထိုး၊ကြည့်မြင်တိုင်။PH NO: 0950 74606 (ကိုထွန်းလင်း)စိတ်ဝင်စားပါက ဖုန်းဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။	2 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down luchawlay May 2010 Posts: 0Registered Users စိတ်၀င်စားတယ်အစ်ကိုရေ မနက်က အချိန်ဘယ်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိလဲ ည ကဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိလဲအစ်ကို yawyuwa97 at gmail.com ကို အပ်ပေးပါအစ်ကို	Vote Up0Vote Down လေပြည် May 2010 Posts: 15Registered Users လစာ က ရောဟင် ......:smile:	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
May 2010 လေပြည်